Ịkpa aṅụ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ịkpa aṅụ
Ụdị dị mma na uru bara uru nke loquat
Medlar bụ mkpụrụ osisi mgbe ọ bụla mkpụrụ osisi yiri mkpụrụ apricots. N'ime e nwere ọkpụkpụ anọ. Osisi dị elu nke osisi bụ 10 m, akwụkwọ ndị ahụ bụ oblong. Akpụkpọ osisi ahụ dị oke, ma n'ime ahụ dị nro ma na-egbuke egbuke, ọ bụ ngwakọta nke apụl, aprịkọt na strawberry ka o sie ụtọ.
Enwere ike iri mmanụ aṅụ na honeycombs, esi enweta mmanụ aṅụ si honeycombs n'ụlọ
Mmiri mmanụ aṅụ bụ ihe okike nke na, na-esi ísì ísì ya na uto dị iche iche pụrụ iche, jupụtara na ọnọdụ okpomọkụ. Ebe ọ bụ na oge ntanetụ, aṅụ honeycombs aghọọla ihe dị oké ọnụ ahịa nke mmepụta anụ, ma ọ bụghị onye ọ bụla maara ihe bara uru maka honeycombs?
Kedu ọrụ drones nọ n'ógbè bee
Maka ndị maara banyere ịkpa aṅụ site na nzaghachi, ọ na-esiri ike ịghọta ihe mmiri dị na ya na ihe kpatara ya ji dị mkpa. Ọtụtụ ndị maara nanị akụkụ ọjọọ nke ịdị adị ya: ụkọ mmiri adịghị eme ihe ọ bụla na ekwo Ekwo, ma ọ na-eri eri ise. Ka o sina dị, na akụkụ nke ọ bụla, ọdịdị nke okike na-enye maka ịdị adị nke ọtụtụ ndị dị otú ahụ.
Nkọwa nke ụdị mmanụ aṅụ nkịtị
Anyị maara site na nwata na mmanụ aṅụ bụ nri dị ụtọ ma dị mma. Taa, ahịa na-enye anyị nnukwu mmanụ aṅụ dị iche iche. N'etiti ha, ọ dị mwute ikwu, gafee na fakes. Iji mee ka ịzụta àgwà ma ghara imerụ ahụ ike gị, ọ dị ezigbo mkpa ịma ụdị mmanụ aṅụ ọ bụ na ihe ndị ọ nwere.
Otu esi echebe vatochnik: isi ihe na-eto eto n'ubi gi
Asclepias, ma ọ bụ, dịka a na-akpọkwa ya, vatochnik bụ ahịhịa ogwu ma ọ bụ ọkara shrub nke dị elu site na 0,5 ruo 1.5 mita, nke a na-ewere dị ka ebe a mụrụ Ebe ugwu na South America. Uwa nwere ihe rhizome siri ike, jupụtara n'ogo. Nnukwu akwukwo a na-akwapu na-enwe obi iru ala ma o bu ndi mmadu.
Agwa Buckwheat: gini bu ojiji ya, otu esi ahọrọ, chekwaa na odachi
Ọ bụghị ihe nzuzo na, dabere na osisi nke aṅụ na-achịkọta nectar, uto na uru nke mmanụ aṅụ dị iche. Taa, anyị ga-ekwu maka ihe kachasị ọnụ ahịa - buckwheat mmanụ aṅụ. Iji nweta mmanụ aṅụ buckwheat, aṅụ ga-anakọta nectar nanị site na okooko buckwheat, nke, dịka ị chepụtara, na-enye anyị buckwheat.
Atụmatụ ịkpa aṅụ maka ndị mbido, ebe ị ga-amalite
Tupu ịmalite ịmepụta apiary, onye na-azụ anụ na-amalite ịkpa kwesịrị ịmụta ihe bụ isi nke ịkpa aṅụ. Isiokwu a nwere ndụmọdụ ndị dị mkpa maka onye na-elekọta anụ ụlọ: ebee ga-amalite, otu esi họrọ aṅụ, ụdị hives, nlekọta kwesịrị ekwesị, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ebumnuche nke ịkpa aṅụ, ọ dị mkpa ka ị mara nke mbụ.
Mkpụrụ ọgwụ "Bipin" maka aṅụ: usoro na usoro nlekọta
Nhazi aṅụ site na akọrọ bụ ihe dị mkpa maka ndị na-aṅụ aṅụ. Mgbe ụfọdụ, ndụ ezinụlọ dum nke aṅụ na-adabere na ya, mgbe ahụ ọgwụ "Bipin" na-abata na enyemaka, nke gụnyere amitraz. "Mfe": nkọwa, ngwugwu na ịhapụ ụdị ọgwụ Amitraz, nke bụ isi ihe na-arụsi ọrụ ike nke "Bipin", bụ ọgwụ a chọrọ iji merie ọtụtụ aṅụ.
Ntuziaka na usoro eji ọgwụ "Apira"
Na aṅụ aṅụ, a na-ejikarị ọgwụ ọjọọ dị iche iche eme ka ọnụọgụgụ nke ndị mmadụ n'otu n'otu na swarms na apiary. Tụlee taa otu n'ime ha - ọgwụ "Apira". Ngwurugwu, akwukwo ohapu, ozi ndi ozo "Apira" - ogwu nke na eme ka ndi mmadu jide ha mgbe ha na-aru. Ejiri ya na ite rọm plastic 25 g ọ bụla, ọ bụ ọcha gel.
Esi esi nri meadu na ulo na ihe i kwesiri ime
Mead - ihe ọṅụṅụ a maara na ndị mmadụ kemgbe oge ochie nke Russia. Ọ bụ ndị nna nna anyị kwadebere ya, taa, ọ dịbeghị ihe ọ na-ewu ewu. Ugbu a ị nwere ike ịzụta ihe ọṅụṅụ ọ bụla na ụlọ ahịa ọ bụla, ma n'etiti anyị, ọtụtụ ndị hụrụ ezigbo ụtọ ụlọ. Na intricacies nke nri mead, uzommeputa nke e nyere n'okpuru, ga-agwa isiokwu a, yana ị ga-amụta ọtụtụ bara uru ndụmọdụ.
Usoro ochichi na usoro onu ogugu "Anumanu" maka aṅụ
Uru nke apiary na-adabere na ahụike nke aṅụ. Ndị na-elekọta anụ aṅụ adịghị echefu ihe nchebe ma site n'oge ruo n'oge, ha na-akwadebe apiary na nkwenkwe a pụrụ ịdabere na ya. "Apimaks" magburu onwe ya - ihe dị mma na-emetụta ahụ, na-ekpochapụ ọrịa na nje. Nkọwapụta na ịhapụ ụdị ọgwụ mgbapụta Apimax Balsam bụ nkwalite oriri pụrụ iche nke na-eje ozi dịka ọgwụgwọ na mgbochi nke ọrịa fungal na nje nje na aṅụ na Nozema.
Kedu otu esi eme Dadan onwe gị
Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-elekọta anụ ụlọ na-eji ekwo ekwo nke ihe e nyere ma ọ bụ mgbanwe ya. Aha nke ulo anu ahu bu ndi nadighi nma nke Charles Dadan - onye na-anu anu nke onye French, onye were ihe omumu nke oge ya, meputara atumatu nke ekpuchi otu ulo ahu nke nwere oke onu ogugu 11 na otutu ulo ahia di n'elu.
Esi eji aka gị mee ihe mkpuchi multicase
Taa, ọ naghị esiri ike ịchọta ihe mkpuchi nke multihull. Enwere ike ịzụta ihe dị otú a n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa ọ bụla pụrụ iche na ire ere maka ịkpa aṅụ. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ego ma n'otu oge ahụ chọpụta ikike ime ihe gị, mgbe ahụ, i nwere ike ime ihe mkpuchi yiri nke aka gị.
Olee otú ịzụlite aṅụ na multicase hives
Idebe aṅụ na multi-hives bụ naanị maka ọkachamara beekeeper. Achọpụtara usoro a n'ihi ọrụ ya. A sị ka e kwuwe, ịba mmanụ nke mmanụ aṅụ na-abawanye ugboro 3. Ka anyị hụ ihe mere. Atụmatụ Atụmatụ Nke a nwere ike ime nke a.
Osisi kacha mma nke osisi mmanụ aṅụ maka aṅụ gị
Iji nweta ezigbo mmanụ aṅụ, ọ dị ezigbo mkpa inwe nnukwu mmanụ aṅụ dị nso na apiary. Ọ bụrụ na ọ dịghị, ị nwere ike inyere ọdịdị aka na itinye aka na nsị osisi nke nwere ike ịmepụta otutu pollen na nectar. N'isiokwu a anyị ga-enye ndepụta nke osisi kachasị mma mmanụ aṅụ, na-agbakwunye foto ya na aha.
Gịnị mere ndị na-aṅụ aṅụ ji achọ ka ndị mmadụ ghara ịkụcha nkịtị?
Ọ ga - adị, gịnị bụ ojiji nke ahịhịa na - egbu egbu, nke na - ekwesighi ọbụna maka nri ụmụ anụmanụ? Ma ọ dịghị - n'anụ ahụ, ihe nile nwere ngwa ya. Na ọnyá nkịtị, nke na-ewu ewu na beekeepers, gosikwara nke a ọzọ. Nkọwa botanical A pụrụ ịhụ osisi a na-atụghị anya ọma nke ọma na steepụ na n'okporo ụzọ ụzọ, ma n'akụkụ ebe ugwu, na nso nso mkpofu.
Nnukwu mmanụ aṅụ na aka aka gị
Iji kpochapụ mmanụ aṅụ, ọ dị gị mkpa ngwaọrụ pụrụ iche - ọpụpụ mmanụ aṅụ. Ụgwọ nke ngwaọrụ dị otú a adịghị ala, n'ihi ya, ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịzụta ya. Isiokwu a ga-atụle otú ị ga-esi eji aka gị mee ka onye na-ewepụta mmanụ aṅụ. Kedu ka o si arụ ọrụ? A na-eji mmanụ ike na-ebu mmanụ aṅụ. Nke a na - eme dị ka ndị a: eburu anụ ọhịa ahụ ji mma pụrụ iche; mgbe ahụ, a na-etinye ha na cassettes nke jidere etiti ahụ n'oge usoro ahụ; a na-atụgharị rotor na mmanụ aṅụ na nsị nke mmanụ aṅụ; ọ na-asọba na ala ma banye n'ime oghere ahụ iji kpochapụ ya.
Ọrụ ndị isi nke nwa nwanyị Bee na ezinụlọ Bee
A na-akpọ anu ahụ eze nke ekwo Ekwo. Ọ bụ ọrụ maka isi ọrụ nke na-eme ka e nwee oke nke oke bee, na-aga n'ihu nke ụdị ahụ na nzizi nke mkpụrụ ndụ nke mkpụrụ. Akwụnye ego ọ bụla dị na ekpuchi bụ ọrụ maka ọrụ dị iche. Drones bụ ndị nwoke, a na-emegharị nanị maka Fertilization nke akpanwa.
Kedu ihe na esi eme ha?
Voshchina - efere beeswax na onu ogugu ndi ozo maka ime ngwa ngwa nke honeycombs. A na-etinye akwụkwọ a na etiti pụrụ iche nke arụnyere na ekwo Ekwo. Uche a na-enyere aka igbochi oke ohia ka o ghara iju ya ma tinye ya. Na nkenke, ọ bụghị nanị na mmanụ aṅụ na-eme ka e nwee ezigbo ihe ubi, kamakwa ọ ga-eme ka ahụike nke ezinụlọ bee.
Ihe ndị bara uru na atụmatụ nke iji oghere ntutu
Ọbụna ndị na-elekọta anụ ụlọ kachasị mara mgbe a kpọtụrụ okwu ahụ bụ "isi" enweghị ike ịkọwa ihe ọ bụ. Okwu ahụ sitere na Latin ma sụgharịa ya dịka "isi". Nke a bụ isi ihe dị mkpa. Nzuzo pụtara n'onwe ya obere obere anu ulo, zuru oke zuru ezu, ya na akpanwa na ndị ọrụ ya.
Kedu, mgbe na otu esi aṅụ. Otu esi egbochi nsị nke aṅụ, foto, vidiyo
Ruo ogologo oge, mmanụ aṅụ na-ejere mmadụ ozi dị ka isi iyi nke ngwaahịa na-enye ahụike: mmanụ aṅụ, wax, propolis, wdg. Na mgbakwunye, ọrụ ya dị oke dịka onye na-emepụta ihe ọkụkụ nke osisi. Otu n'ime ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ na ndụ nke ógbè bee bụ nsị ya, ya mere, ọ dị mkpa ịghọta ihe ndị dị na usoro a, yana ịmara otú e si zere aṅụ na-agwụ.
Na-eto eto seedlings maka akuku n'ime griin haus nke polycarbonate: mgbe agha na ihe ndi ozo bara uru karia?
Esi esi nri nri ngwa ngwa na ngwa ngwa? Ntụziaka dị mfe nke nri na-atọ ụtọ na foto
Lekọta "cactus - orchids" "Epifillum" n'ụlọ
Geese - ụdị kacha mma maka idebe ụlọ
Eggplants na mpaghara Moscow: ụdị kacha mma na nkọwa ha
Anyị na-eto tomato "Volgograd 5 95": nkọwa, atụmatụ na foto nke ụdị dị iche iche
Olee otu esi ahọrọ spruce maka ubi
MTZ 82 (Belarus): nkọwa, nkọwa, ike